Aqoonsiga Xaqa Eebbe II, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Ogaanshaha iyo waaya aragnimada Eebbe - taasi waa waxa nolosha ay ku saabsan tahay! Eebbe wuxuu inoo abuuray inaan xiriir la lahaano. Nuxurka, udub dhexaadka nolosha weligeed ah, ayaa ah inaan ogaano Ilaah iyo Ciise Masiix oo uu soo diray. Ogaanshaha Ilaahay kama imaanayso barnaamij ama hannaan, laakiin wuxuu ku dhexmaraa xiriir qof la yeesho. Markii cilaaqaadka sii kordhayo, waxaan u nimid fahamka iyo waayo aragnimada dhabta ah ee Eebbe.
Sidee buu Ilaah u hadlaa?
Ilaah wuxuu ku hadlayaa Ruuxa Quduuska ah isagoo adeegsanaya Kitaabka Quduuska ah, ducada, duruufaha iyo Kaniisadda inay isu muujiso naftiisa, ujeeddadiisa, iyo jidadkiisa. "Maxaa yeelay, Erayga Ilaah wuu nool yahay oo xoog badan yahay wuuna ka af badan yahay seef kasta oo laba af leh, wuuna dhex galaa ilaa la kala qaado nafta iyo ruuxa, iyo dhuux iyo lug, oo waa xaakin fikirka iyo garaadka qalbiga" (Cibraaniyada 4,12:XNUMX).
Eebbe wuxuu nagula hadlaa tukashada, laakiin sidoo kale eraygiisa. Ma fahmi karno Ereygiisa ilaa Ruuxa Quduuska ahi ina baro. Markaan u nimaadno Ereyga Ilaah, qoraaga qudhiisa ayaa diyaar u ah inuu na baro. Runtu waligeed lama ogaan. Runta ayaa la muujiyay. Markii runta la muujiyo, layguma hoggaamin doonno kulan lala yeesho Ilaah - taas IST kulan la leh Ilaah! Markuu Ruuxa Quduuska ahi ka muujiyo runta ruuxiga ah Erayga Eebbe, wuxuu nolosheena gala qaab shakhsi ah (1 Korintos 2,10: 15-XNUMX).
Qorniinka oo dhan waxaan ku aragnaa in Ilaah shakhsi ahaan ula hadlay dadkiisa. Markuu Eebbe hadlay, waxay badanaa ku dhacdaa qof kasta qaab gaar ah. Ilaah wuu nala hadlayaa markuu ujeedo leeyahay nolosheena. Haddii uu doonayo inuu nagu lug yeesho shaqadiisa, wuu isu muujiyaa si aan ugu jawaabno rumaysad.
Casuumada Eebbe ee ah inuu la shaqeeyo isaga marwalba waxay u horseedaa mashaakil xagga aaminaada ah oo u baahan rumayn iyo ficil. "Laakiin Ciise wuxuu ugu jawaabay: Aabbahay wuxuu shaqeeyaa ilaa maantadan la joogo, aniguna waan shaqeeyaa ... Markaas Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Wiilku waxba ma awoodo inuu iskiis u sameeyo, laakiin waxa keliya ee wuxuu arkaa aabihii oo samaynaya; maxaa yeelay waxaas ayaa sameeya, wiilkuna sidaas oo kale ayuu yeelaa. Waayo, aabbuhu wuu jecel yahay wiilka, oo wuxuu ku tusaa wuxuu isagu sameeyo oo dhan, oo weliba wuxuu ku tusi doonaa shuqullo kuwan ka waaweyn inaad la yaabi doontaan. (Yooxanaa 5,17:19, 20-XNUMX).
Sikastaba, martiqaadka Eebbe ee ah inaan lashaqeyno markasta waxay dhalisaa xiisad xagga aaminaada ah oo u baahan aaminaaddeena iyo ficilkeena. Markuu Eebbe nagu martiqaado inaan isaga ku soo biirno shaqadiisa, wuxuu leeyahay shaqo leh qaab rabaani ah oo aan annagu keligeenna ku qaban karin. Tani waa, sidaa darteed, in laga hadlo, dhibic caqiido oo iimaan leh markay tahay inaan go’aansanno inaan raacno waxa aan dareemno inuu Eebbe ina faray inaan sameyno.
Qalalaasaha aaminaada ayaa ah meesha loo leexdo ee ay tahay inaad go'aan ka gaarto. Waa inaad go’aansato waxa aad ka aaminsan tahay Ilaahay. Sida aad uga jawaab celiso halkaan loo jeedsanayo ayaa go aansan doonta inaad sii waddo ku lug lahaanshahaaga Ilaah wax uun rabaani ah oo uu isagu kaliya qaban karo, ama inaad wadadaada u sii wadato oo aad seegto waxa Eebbe u qorsheeyay noloshaada. Tani maahan waayo-aragnimo hal-mar ah - waa waayo-aragnimo maalinle ah. Sida aad ugu nooshahay noloshaada ayaa ka marag ah waxa aad Ilaah ka aaminsan tahay.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag ee annaguba Masiixiyiinta ah ay tahay inaan sameyno waa inaan nafteenna diidno, aqbalno doonista Ilaah oo aan raacno. Nolosheenu waa inay noqotaa mid Ilaah-xudun u ah, ee maaha inaan xudun u ahaado. Haddii Ciise noqdo Rabbiga nolosheena, wuxuu xaq u leeyahay inuu ahaado Sayid wax kasta. Waxaan ubaahanahay inaan sameyno isbadal weyn oo nolosheena ah si aan ugu soo biirno shaqada Allah.
Addeeciddu waxay u baahan tahay ku tiirsanaan buuxda xagga Eebbe
Waxaan waayo-aragnimo u leenahay Ilaah addeeca isaga oo addeecna intuu hawlaheena innaga dhex marayo. Muhiimad muhiim ah oo ah inaad xasuusnaato waa inaadan sii wadi karin noloshaada sidii caadiga ahayd, meeshaad joogtid oo aad isla markaasba Ilaah la socotid. Is-waafajinta marwalba waa lama huraan ka dibna adeeca ayaa raacda. Addeeciddu waxay u baahan tahay ku tiirsanaan buuxda xagga Ilaah inuu kugula shaqeeyo adiga. Markii aan diyaar u nahay inaan wax walba oo nolosheenna ka mid ah ku hoos-galno wejiga Masiixa, waxaan ogaan doonnaa in hagaajinta aan sameysanno ay runtii mudan tahay abaalmarinta la-kulanka Ilaahay. Haddii aadan noloshaada oo dhan u dhiibin boqornimadii Masiixa, hadda waa waqtigii aad go'aan ku gaari laheyd inaad naftaada beeniso, iskutallaabta kor u qaadid oo aad isaga raacdo.
Haddaad i jeceshihiin, qaynuunnadayda waad xajin doontaan. Oo waxaan doonayaa inaan Aabbaha weyddiisto, oo isna wuxuu idin siin doonaa qalbiqabow kale inuu isagu weligiin kula joogi doono, kaas oo ah ruuxa runta ah oo aanay dunidu qaadan karin, maxaa yeelay, iyadu ma arag, mana garanayso. Waad garanaysaa isaga, maxaa yeelay, isagu wuu kula joogayaa wuuna idinku jiri doonaa. Ma doonayo inaan ku dhaafo adigoo agoon ah; Waan kuu imid Weli waa in yar, markaa dunidu mar dambe iima arki doonto. Laakiinse waa inaad i aragtaa, waayo, waan noolahay, adiguna waa inaad noolaataa. Maalintaas waxaad arki doontaa inaan aabbahay ku jiro, idinna aad igu jirtaan, anna aan idinku jiro. Ku alla kii qaynuunnadayda xajiya oo xajiya, waa kaas kan i jecel. Laakiin ku alla kii i jecla, aabbahay waa jeclaan doonaa, anna waan jeclaan doonaa isaga, waana isu muujin doonaa isaga (Yooxanaa 14,15-21).
Addeeciddu waa muujinta muuqata ee jacaylka aan u qabno Ilaah. Siyaabo badan, addeeciddu waa waqtigeenna runta. Waxaan sameyneynaa
soo bandhigno waxaan si dhab ah u aaminsanahay isaga
go'aamiso bal inaan aragno shaqadiisa gudaheena
go'aamiso haddii aan ku baran karno isaga si dhow, hab caan ah
Abaalgudka weyn ee adeecidda iyo jacaylka ayaa ah in Ilaah naftiisa noo muujin doono. Tani waa fure u ah la kulanka Ilaah nolosheena. Markii aan ka warqabno in Ilaah uu had iyo goorba ka shaqeynayo hareeraheenna, in uu xiriir jacayl naga qabo, in uu nala hadlo oo uu na martiqaado in aan isaga ku soo biirno shaqadiisa, oo annaguna diyaar ayaan u nahay in aan ku dhaqano caqiido oo aan ficil sameyno tallaabo adoo sameeynaya hagaajinta addeecista awaamiirtiisa, ka dib waxaan ku ogaan doonnaa Ilaah khibrad inta uu shaqadiisa qabanayo.
Buugga Aasaaska: "Khibrad Eebbe"